Xukuumada Soomaaliya oo xal u raadineysa khilaafka siyaasadeed ee ka jira Galkacyo labadeeda dhinac – idalenews.com
Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Galkacyo ayaa wada dadaalo uu ku xalinayo khilaafaadka ka jira Galkacyo labadeeda dhinac ee ay ka kala arrimiyaan Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa xalay waqooyiga Galkacyo kula kulmay Mas’uuliyiinta Maamulka Mudug ee Puntland iyo saraakiisha Amniga, isagoo ka codsaday sidii loo yareyn lahaa khilaafka, isla markaana labada dhinac si wada jir ah uga shaqeeyaan ammaanka.
Warar ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in Mas’uuliyiinta Gobolka Mudug ee Puntland ay u gudbiyeen Ra’iisul Wasaaraha cabasho la xiriira dad ka soo jeeda deegaankooda oo afduub loogu heysto dhinaca Galmdug.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa balan qaaday inay ka shaqeyn doonaan ammaanka labada dhinac, isla markaana Xukuumada ay xooga saari doonto sidii labada maamul isu soo dhowaan lahaayeen.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa ka dalbaday labada dhinac inay sii daayaan dadka loo kala heysto afduubka, inkastoo dhowaan Puntland ay dil ku xukuntay nin ka soo jeeda Galmudug, kaasoo ay ku eedeysay inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay, markii lagu soo qabtay waxyaabaha qarxa iyo hub.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa la filayaa inay soo afjaraan khilaafaadka siyaasadeed ee labada dhinac u dhaxeeya, taasoo maalmihii la soo dhaafay ay si weyn u hareysay labada dhinac ee Galkacyo ka kala arimiyaan ee Puntland iyo Galmudug.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa maanta la kulmaya madaxda Galmudug, si ay u gaaraan heshiisyo ku saabsan sidii dowladda Federaalka iyo Galmudug iskaashi iyo wada shaqeyn u yeelan lahaayeen, kadib markii shalay Ra’iisul wasaaraha heshiis la soo saxiixday Puntland.
Saraakiil ka socota Qaramada Midoobay oo booqatay xarunta Unicef ee degmada Jowhar(Sawiro)